परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिएसँगै डा.खड्का अमेरिकातिर – Satyapati
परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिएसँगै डा.खड्का अमेरिकातिर
सत्यपाटी । ६ आश्विन २०७८, बुधबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा.नारायण खड्काले परराष्ट्रमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्री डा.खड्कालाई आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।
मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा डा.खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले डा.खड्काको विषयमा सहमति जनाएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन् । डा.खड्काले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् ।
नेता खड्काको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री पदको शपथ लिएसँगै उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी जनाउन नेपालका तर्फबाट मन्त्री नहुँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै देउवाले गठनबन्धनका नेताहरूलाई सहमत गराएका थिए ।
डा. खड्का २००५ साल चैत ७ गते भोजपुरमा जन्मिएका हुन् । ०२३ सालमा विद्यार्थी जीवनकालबाटै राजनीतिमा होमिएका खड्का पटक–पटक मन्त्री भइसकेका छन् । उदयपुरबाट निर्वाचन जितेका थापा संविधानसभा सदस्य पनि हुन् । उनी यसअघि पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् ।
किन बढ्यो मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अविश्वासको दुरी ?
बलात्कार मुद्धा खेपीसकेका रावतद्धारा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कुटिए
राप्रपामा सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन
बुटवलको मोतीपुरमा कर्फ्यु कायमै, सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक बस्दै
बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि आपतकालिन बैठक,तत्काल उद्धारकर्मीहरु परिचालन गरिने
बाँकेमा थप एक जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ५